Wejiga koowaad ee shrika Wasiirada Arrimaha dibadda ee Urur Goboleedka IGAD oo la soo gabo gabeeyay |
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah u furay shirka Wasiirada Arrimaha dibadda ee Urur Goboleedka IGAD ayaa ka hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa beesha caalamka gaar ahaan dowladaha Urur Goboleedka IGAD uga mahadceliya sida ay u garab istaageen Soomaaliya, isagoo xusay in nabadgelyada Soomaaliya ay xilligan tahay mid la isku haleyn karo, taasi oo suurte gelisay marigelinta shirka.
“Tani waxa ay caddeyn u tahay in Soomaaliya ay ku talaabsatay Nabad iyo horumar, waa guul taariikhi sidoo kale tani waxaa suurta geliyay markii ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM ay ku guuleysteen in meelo badan oo dalka ka mid ah ay ka saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Xoghayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxbuub Macalin oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in dowladaha IGAD ay sii wadi doonaan taageerad ay siinayaan Soomaaliya, isagoo xusay in tani ay fursad u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Ethiopia Dr Tedros Adhanom oo shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in ajandeyaasha ugu muhiisan ee shirka looga hadlayo ay ka midyihiin horumarka ay dowladdu ku talaabsatay, hirgelinta hiigsiga cusub ee sanadka 2016-ka iyo dar dargelinta howlaha amniga.
Shirka oo ah kii 53aad ee Wasiirada Arrimaha dibadda ee Urur Goboleedka IGAD ayaa lagu wadaa in si rasmi ah gelinka dambe ee maanta la soo gabo gabeeyo, isla markaana laga soo saaro qodobo wax ku ool ah, iyadoo uu shirkan noqonayo muddo 29 sanno kaddib in shir ceynkan oo kale lagu qabto caasimadda Soomaaliya.